Nhau - Rwendo rwemakore gumi kuenda kumusoro kwenyika
2011, Gaobeidian PRISES Biotechnology Co, Ltd. yakavambwa;
2015, Iyo kambani inogadzira: Makondomu, Pamuviri uye Ovulation bvunzo kit yakabudirira kupfuudza iyo CE certification
2018, Kambani vakapinda panguva South Africa International Exhibition uye kutanga chirongwa pose musika marongerwo
Kubva pasina chinhu kusvika panguva ino, kubva pakona muBaoding kusvika pamusika wepasi rose, kambani PRISES Biotechnology Co., Ltd. yanga ichikura nekukurumidza pasi pehutungamiriri hweMukuru, VaMeng Lingwen. Nekugamuchirwa kwakanaka uye mukurumbira pamusika wepasi rese wehunhu hwayo hwakanaka, zvigadzirwa zvakawanda zvakatumirwa kune nyika dzinopfuura makumi mashanu kana matunhu ekunze.
Inotungamira tekinoroji yekurapa, kuzadzisa iyo monument yehutano. Kubudikidza nekudzika mukuvandudzwa kwemusika wedhizaini yezvokurapa, masevhisi ekambani akawedzerwa kubva kune imwechete nzvimbo yeIn Vitro Diagnostic (IVD) bvunzo kusvika kune akawanda mabhizimusi zvikamu senge reagent diagnostics, hutachiona sampling, zvekuchengetedza zvekurapa zvinoshandiswa.
Parizvino, yaive yakavakwa neiyo yakamisikidzwa chena yemusangano iyo ingangoita 3000 mativi metres, kusanganisira 100000 nhanho musangano wakachena (550 ㎡) uye R & D rabhoritari yematanho 10000 standard (150㎡)
Pakutanga kwe COVID-19 muna 2020, kambani PRISES yakawedzera chirongwa cheCOVID-19 test kit sezvo iri nyanzvi yekugadzira yeIVD bvunzo kit. Muna Chikumi 2020, iyo COVID-19 bvunzo kit iyo yakaburitswa nekambani yakasimbiswa nemhando yepasi rose. Shure kwaizvozvo, kit yekuyedza yakavhurwa mumisika yepamba neyekunze nekukurumidza uye yakabatsira muchirongwa chekuona hutachiona hweCOVID-19.